Etu esi gbanyụọ ebe egwuregwu | Akụkọ akụrụngwa
Etu esi gbanyụọ ebe egwuregwu
Maka ndị nkịtị na ndị ọrụ egwuregwu nke egwuregwu na ngwaọrụ Apple, Egwuregwu Center ngwa abaghị uru karịa ịtụfu daisies na pigs. O nweghị uru ọ bara. Ee ee, nke mere na oge ọ bụla anyị banyere igwu egwuregwu ụfọdụ, a nnukwu akwụkwọ mmado na-egosi na anyị enweelarị njikọ ọtụtụ puku mmadụ (ndị na-eche otu ihe ahụ). N'ezie, kemgbe ọtụtụ afọ, Apple amalitela ịtụle iwepu ya kpamkpam n'ime iOS 8 ọhụrụ ahụ, nke a ga-ewepụta, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na Septemba nke afọ a.
Ọ dabara nke ọma anyị nwere ike deactivu ya ka ọ ghara ịna-enye anyị nsogbu oge niile oge ọ bụla anyị na-egwu egwu. N'ụzọ dị otú a, mgbe anyị na-abanye egwuregwu ọ bụla, anyị agaghịzi eche maka Gamelọ Ọrụ Egwuregwu iji gwa anyị ọganihu anyị ma ọ bụ nke ndị enyi anyị. Iji mee nke a, anyị ga-aga n'ihu dị ka anyị na-agwa gị n'okpuru.
Nke mbụ, anyị ga-aga ngalaba ahụ Ntọala nke ngwaọrụ anyị.
Anyị na-achọ ngọngọ nke ise nke nhọrọ ebe ọ dị Ebe Egwuregwu. A ga-egosipụta nhọrọ ndị dị na nri.
Ugbu a, anyị ga-agarịrị nhọrọ nke mbụ ebe ọ dị NJ anyị ma pịa.
Ngwaọrụ ahụ ga - egosi anyị nhọrọ atọ: Pụpụ you chefuru Apple ID gị? na Kagbuo. Iji deactivate Game Center ma gosi anyị ozi obi ụtọ anyị ga-emerịrị pịa akpa nhọrọ Oge mmechi.
Ọzọ, aha Apple ID anyị ga-egosi na oghere oghere ebe anyị ga-ede paswọọdụ nke akaụntụ anyị iji nwee ike ime ka Centerlọ Ọrụ Egwuregwu rụọ ọrụ ọzọ. Site ugbu a gaa n'ihu, oge mbụ anyị laghachiri n'ihe kachasị amasị anyị, oge mbụ ọ ga-agwa anyị ka anyị rụọ ọrụ ya, anyị ga-pịa kagbuo ịhapụ usoro a ruo mgbe ebighị ebi. Site ugbu a gaa na otu n’ime ngwa ndị kacha abaghị uru nke iOS agakwaghị enye anyị nsogbu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Etu esi gbanyụọ ebe egwuregwu
Daalụ, ọ bụ nnukwu enyemaka. ngwa ahụ abaghị uru.
Ndụmọdụ gị anaghị arụ ọrụ.
Ọ bụ ezie na agbanyụọla m ya, ọ ka na-apụta
Daalụ maka ndụmọdụ gị. M soro ya na nhọrọ iji rụọ ọrụ ka na-egosi ma ọ dịkarịa ala m nwere ike ịkagbu oge ọ bụla ọ bịara.
Otu esi ehichapụ akụkọ ihe mere eme na Firefox
Etu esi gbanwee foto gaa na onyonyo ASCII dị mfe na Ascii Generator 2